Ndị gọvanọ & ndị nlekọta
'Ọchịchị dị ike.' OFSTED - Nọvemba 17
Ndị gọvanọ sitere na nzụlite dị iche iche, na -egosipụta ọtụtụ ndị nwere mmasị n'ụlọ akwụkwọ anyị, mana ha nwere otu ihe dị mkpa jikọrọ ọnụ. Ha raara onwe ha nye ịhụ na ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ nwere agụmakwụkwọ kacha mma enwere ike. Nke a bụ isi ihe ndị gọvanọ niile na -elekwasị anya.
Otu na-achị achị ụlọ akwụkwọ nwere ndị gọvanọ nne na nna, ndị gọvanọ ndị ọrụ na ndị gọvanọ ahọpụtara. Governtù na -achị isi zuru ezu na -ezukọ ugboro atọ n'afọ, na -akpọkwa nzukọ ndị ọzọ mgbe ọ dị mkpa.
Ịghọ Gọvanọ Nne na Nna ghe oghe nye ndị nne na nna ma ọ bụ ndị na -elekọta ụmụaka n'ime ụlọ akwụkwọ. Mgbe ohere dapụtara, a na -eme ntuli aka iji họpụta gọvanọ ọhụrụ, onye ga -anọ n'ọchịchị afọ anọ. Ọzụzụ nkuzi, maka ndị gọvanọ ọhụrụ, dị mkpa. Ọzụzụ ndị ọzọ iji nweta ihe ọmụma na nka dị iche iche dịkwa, na -akwụghị ụgwọ.
Ndị gọvanọ ụlọ akwụkwọ praịmarị Wentworth nwere ọtụtụ ahụmịhe, ihe ọmụma na ike na -arụ ọrụ nke ọma dịka otu na -eme mkpebi ụlọ ọrụ.
Agbanyeghị na ọrụ ndị na -achị isi bụ nke afọ ofufo, ọ nwere ọtụtụ ọrụ mana n'ozuzu ya, ọ bụ ebe ahụ ịtọ ntọala iwu maka ụlọ akwụkwọ na inyocha mmejuputa ya. dị ka onye isi ụlọ akwụkwọ na ndị ọrụ jikwaa ya. Ha na -arụ ọrụ dị mkpa na iduzi na njikwa ụlọ akwụkwọ ahụ. Ha na -ekenye ndị otu ụlọ akwụkwọ ọrụ ibu ọrụ nhazi. Nke a bụ onye isi ụlọ akwụkwọ, osote onye isi nkuzi na ndị otu otu ndị isi.
Ndị gọvanọ na -enwe nzukọ bọọdụ zuru oke ugboro atọ n'afọ yana nzukọ ọgbakọ kwa afọ na Ndị otu. Na mgbakwunye, ndị gọvanọ nwere kọmitii okpuru ọchịchị nke na-enyocha nhazi ụlọ akwụkwọ, usoro na arụmọrụ na usoro ọmụmụ, ndị ọrụ, ego na ogige.
Ndị gọvanọ na -etinye onwe ha ebe ọ bụla enwere ike n'akụkụ niile nke ndụ ụlọ akwụkwọ. Ha na -eleta ụlọ akwụkwọ ahụ nke ọma na nke na -ezighi ezi, na -akwado mmụta ụmụaka ma na -arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ọrụ niile, iji mee ka ohere anyị na -enye.
Dị ka ndị gọvanọ na ndị njikwa usoro nke ụlọ akwụkwọ ahụ, ha na -agwa onwe ha maka atụmatụ gọọmentị na ihe ọ pụtara maka ụlọ akwụkwọ. Ezigbo nhazi ọrụ arụpụtara n'etiti ndị gọvanọ na ndị otu ndị isi dị mkpa na idobe Wentworth dịka ụlọ akwụkwọ na -eme nke ọma nke anyị niile nwere ike ji anya isi.
Ọ bụ Val Churchill
Onye isi oche nke verntù Na -achị Isi
Oge ọrụ: 07/07/2021 - 06/07/2025
Azụmaahịa / Mmasị nkeonwe: Onweghị
Kọmitii: Ego na ogige, Usoro ọmụmụ
na Ndị ọrụ, Kọmitii na -akwụ ụgwọ, Onye isi nkuzi
Ibu ọrụ: SEND, nyocha data, sayensị
Oge ọrụ: 13/01/2021 - 12/01/2025
Azụmaahịa / Mmasị onwe onye:
Onye isi gọvanọ: Wykham Park Academy, Dashwood Banbury Academy, Future Institute na Harriers Banbury Academy
Gọvanọ - Ụlọ akwụkwọ niile dị na Aspirations Academies Trust
Gọvanọ - Royal Docks Academy
Onye otu - Kọmitii ọkọlọtọ BMAT Trust
na Ndị ọrụ
Ibu ọrụ: Usoro ọmụmụ, nyocha data
Osote onyeisi oche nke verntù Na -achị Isi
Gọvanọ nne na nna
Oge ọrụ: 23/10/2019 - 22/10/2023
Azụmaahịa / Mmasị nke Onwe: Onye isi na onye nwe 50% na Swan Global Services Ltd. Oriakụ G
Swan bụ onye ntụzi na onye nwe 50% na Swan Global Services Ltd.
Ibu ọrụ: Nwa akwụkwọ, Premium egwuregwu, ego
Oge ọrụ: 24/02/2021 - 23/02/2025
Azụmaahịa / mmasị onwe onye: onye ọka iwu maka
Thomas Boyd White na onye njikwa akụrụngwa
maka General Pharmaceutical Council
Onye odeakwụkwọ nye ndị gọvanọ
Ọrụ ndị ọrụ bexley
Oge ọrụ: 06/10/2017 - 05/10/2021
Ibu ọrụ: Gọvanọ ndị ọrụ
David Harrington kwuru
Gọvanọ ndị ọrụ
Oge ọrụ: 04/05/21-03/05/25
Azụmaahịa / Mmasị nkeonwe: Onweghị ​
Ekele dịrị ndị gọvanọ rụrụ ọrụ n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga
Ọgwụgwụ oge ọrụ
Robert Lowrie kwuru
Adreesị maka akwụkwọ ozi maka Onye isi ndị gọvanọ:
Oriaku V. Churchill
Ụlọ akwụkwọ praịmarị Wentworth
Memorandum na Isiokwu njikọ
Akụkọ ego 2019-20
Akụkọ gbasara ego 2018-19
Akụkọ ego 2017-18
Ndebanye aha ndị otu
Ndekọ nke ndị bịara